श्रीमानलाई मार्ने धम्कीपछि रोशनीले झुटो बोलिन, तर चित्रजंग उनलाई नभेटी महरालाई भेट्न पुगे
कर्पोरेट नेपाल , १७ आश्विन २०७६, शुक्रबार, ०९:०८ am
बुधबार साँझ साढे ७ बजेतिर म उनको कोठामा छिर्दा नीलो सलले टाउको बाँधेर सोफामा सुतिरहेकी थिइन्। मलाई देख्नेबित्तिकै हत्तपत्त उठेर हात जोड्न तम्सिएकी उनका हात थरथराइरहे। सोधें, ‘सञ्चो छैन ?’ उनले ‘हो’ भनेर टाउको हल्लाइन्। मलाई रोशनीसँगै कोठामा छाडेर उनका श्रीमान् चित्रजंग शाही बाहिर निस्किए।
मलाई रोशनीबाट कुनै सनसनी खोज खुलासा गराउनु थिएन, न ‘मिडियामा किन बोली फेरिरह्यौ ?’ भनेर र्‍याखर्‍याख्ती पार्नु थियो। धेरै प्रमाणले उनी पीडित हुन् भन्ने आधार तयार गरिसकेको थियो। त्यही आधारमा उनीसँग कुराको सुरुवात मैले आइतबार साँझकै प्रसंगबाट गरें।
सोधें, ‘के भएको थियो त्यो रात ?’ उनको भारी मन तौलिएर मात्रै कुरा बाहिर निकाल्न अभ्यस्त भइसकेको रहेछ। भनिन्, ‘मैले धेरै औषधि खाएँ, औषधिसँगै भोड्का पनि खाएँ, के गरिरहेकी थिएँ, म आफैंलाई थाहा छैन।’ उनले त्यो रात आफू घरमा एक्लै भएको जिकिर बारम्बार गरिरहिन्।
मंगलबार साँझ सोह्रखुट्टेमा रहेको आफन्तको घरमा बसेर केही सञ्चारमाध्यमलाई लगालग अन्तर्वार्ता दिइन्। त्यतिन्जेल महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेका थिए। अन्तर्वार्तामा रोशनीको बोली फेरियो, महरा आफ्नो घरमा आउँदै नआएको उनले बयान दिइन्। ‘तपाईंको मोबाइल अफ थियो, त्यो अन्तर्वार्ताका लागि कसरी पुग्नुभो ?’ मैले सोधें। रोशनीका अनुसार उनलाई तीनकुनेको कोठाबाट ट्याक्सीमा राखेर सोह्रखुट्टे पुर्‍याइएको थियो। त्यो काम पूर्वमाओवादीका एक स्वास्थ्यकर्मीले गरेका थिए। स्रोतहरू भन्छन्, ‘पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता भएकाले उनी रोशनीका श्रीमान् चित्रजंगसँग घनिष्ठ थिए।’ के उनैले रोशनी र महराका बीचमा ‘मध्यस्थ’ को भूमिका खेलेका थिए ? उत्तर अहिले पनि पर्दा पछाडि नै छ। रोशनीका अनुसार भने उनले घटनापछि महरासँग एकपटक मात्रै फोनमा कुरा गरेकी छन्।
मलाई मंगलबार दिउँसै नेकपाका एक माथिल्ला नेताले भनेका थिए, ‘पीडित महिलाले महरासँग घटना बाहिर ल्याएर गल्ती गरें भनेकी छन् रे, केहीबेरमा तपाईंले पनि थाहा पाउनुहोला।’ त्यसपछि मैले ‘उनको मोबाइल त बिहानैदेखि अफ छ, कसरी कुरा भयो होला र ?’ भनेर ती नेतालाई सोधें। नेताले मलाई दिएको जवाफ थियो, ‘उहाँहरूका सयौं सम्पर्क सूत्र हुन्छन्, तीमध्ये एउटामार्फत महरा पक्ष र पीडित महिलाबीच कुरा भइरहेको छ।’ त्यसपछि पनि मैले रोशनीलाई बारम्बार सम्पर्क गर्ने प्रयास गरें तर उनी भेटिइनन्। सोमबार साँझ हामीसँगैको कुराकानीमा महराले आफूलाई कुटपिट गरेको बताएकी रोशनीले मंगलबार साँझ कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘अब यो च्याप्टरै क्लोज भयो।’
मलाई बन्द भएको अध्यायभित्र केही न केही कहानी छ भन्ने लागिरहेको थियो। उनी कुनै गहिरो संकटमा रहेको संकेत मिलिरहेको थियो। बुधबार बिहान फेरि फोन गरें। रोशनीले ‘पत्रकार सम्मेलन हुँदै छ, त्यहीँ भेटौंला तर म तपाईंलाई भेट्न सक्दिनँ’ भन्ने जवाफ दिइन्। मैले सोधें, ‘कतिखेर कहाँ पत्रकार सम्मेलन हुन्छ ?’ उनले समय र ठाउँ बताउन सकिनन्। भनिन्, ‘उहाँहरूले सबै ठिक्क पारिसकेपछि मलाई लिन आउनुहुन्छ।’
रोशनीले बारम्बार ‘महरा सर निर्दोष हो’ भनिरहेपछि ‘त्यसो भए तपाईंले उहाँलाई फसाउनुभएको हो त’ भनेर मैले सोधें। उनले उल्टै प्रश्न गरिन्, ‘उहाँ कहाँ फस्नुभएको छ र ?’ तपाईंको फेसबुकमै त्यो अपडेट छ भनेर जब मैले रोशनीलाई फेसबुक देखाएँ, म आफैं छक्क परें। उनको फेसबुक मेरो कुराकानीको दौरान पनि अद्यावधिक गरिँदैथ्यो। उनले त्यो घटना भएको दिनदेखि आफूले फेसबुक नै नचलाएको दाबी गरिन्। फेसबुकको पासवर्ड उनका श्रीमान्लाई पनि थाहा रहेछ। यसबारे मैले उनका श्रीमान् चित्रजंगलाई पनि सोधें। उनको जवाफ थियो, ‘खोइ अपडेट त भइरहेको छ तर कसले चलायो, मलाई थाहा छैन।’ रोशनीमाथि नै ‘ब्याकफायर’ हुने गरी फेसबुकका स्टाटसहरू उनै चित्रजंग या उनीनिकट अरू कसैले अपडेट गरेका त थिएनन् ? रहस्यको पर्दा खुलिसकेको छैन।
यसअघि पुसमा रोशनीले आत्महत्याको प्रयास गर्दा महराले सबैभन्दा पहिले थाहा पाएका थिए। उनले आफ्नो स्वकीय सचिवालयका एक सदस्यलाई रोशनीबारे बुझ्न पनि पठाएका थिए। रोशनीको अस्वाभाविक स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकार महरा उनी एक्लै घरमा भएका बेला किन गए ? १ घण्टा १९ मिनेटसम्म रोशनी कुन अवस्थाबाट गुज्रिइन् ? घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले महरालाई बोलाएर यही प्रश्न सोध्न सक्ला ? या रोशनीले ‘म डिप्रेसनको रोगी हुँ’ भनेर दिएको निवेदनकै आधारमा चुपचाप बस्ला ? उदेकलाग्दो के छ भने ‘म डिप्रेसनको रोगी हुँ, महरा सर निर्दोष हुनुहुन्छ’ भनेर निवेदन दिन उनलाई श्रीमान् चित्रजंगले महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वर लिएर गएका थिए।
घटनाले हलचल ल्याएको यतिका दिन हुँदा पनि अमेरिकामा रहेका छोराछोरीले रोशनीलाई फोन गरेका छैनन्। श्रीमान् तनहुँबाट फर्किएपछि प्रहरीमा उजुरी गर्न जाऊँला भनेर कुरेकी उनलाई श्रीमान्ले नै पत्याइदिएनन्। बरु काठमाडौं आएपछि सरासर महरालाई भेट्न गए, सरसल्लाह गरे, कुरा मिलाए। घर फर्किएर श्रीमतीलाई ‘कुरा किन बाहिर ल्याइस् ?’ भनेर उल्टो झपारे।
बुधबार साँझ रातको ९ बज्दै थियो, चित्रजंगले रोशनीलाई खाना पकाउन उर्दी गरे। उनी सोफाको छेउमा हात टेकेर उभिने प्रयास गर्दै थिइन्, खुट्टा लडखडाए। म रोशनीलाई त्यही हालतमा छाडेर बाहिर निस्किँदै गर्दा चित्रजंगलाई खोज्दै एक अपरिचित पुरुष ढोकैमा पुगेका थिए। ती मान्छेको आवाज सुनेर रोशनी तर्सिइन्, उनको तर्साइले म झस्किएँ। गल्ली सकिनेबित्तिकैको सडकमा उनकै पहराका लागि बसेका दुई प्रहरी देख्नेबित्तिकै मलाई लाग्यो, ‘के सडकमा बसेका यी पुलिसले रोशनीको सुरक्षा गर्लान् ? खतरा त कोठाभित्र छ।’
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित विनु सुवेदीको समाचार ।
महरा प्रकरणः पीडित रोशनी शाहीलाई उनका पतिले पनि साथ छोडे, ‘डिभोर्स’ गर्ने सहमति